कतारमा बस्ने एक जना नेपाली भाईको यो बेदनाको कथा र उनको प्रस्तुतिले आँशु थामिएनन ! – Complete Nepali News Portal
कतारमा बस्ने एक जना नेपाली भाईको यो बेदनाको कथा र उनको प्रस्तुतिले आँशु थामिएनन !
April 9, 2017	9,039 Views Share
आँशु थामिएनन : कतारमा बस्ने एक जना नेपाली भाईको यो बेदनाको कथा र उनको प्रस्तुतिले आँशु थामिएनन । हरेक नेपालीले यो भिडियो हेर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला । अझ त्यसमा पनि नेपालमा बस्ने र बिदेशमा त पैसाको रुख नै छ भन्ने ठान्नेहरुले, नेपालका शाशकहरुले यो भिडियो हेर्नै पर्छ । यो पसिना र कथा ब्यथाको मूल्य कति होला ?? यस्तो किन भएको होला ?? उत्तर छ शाशकहरु सँग ?????